कति छ बाहुबली स्टार प्रभासको सम्पत्ति? - Everest Dainik - News from Nepal
कति छ बाहुबली स्टार प्रभासको सम्पत्ति?
काठमाडौंः दक्षिण भारतीय सुपर स्टार प्रभासको नयाँ फिल्म ‘साहो’ अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ ।
प्रभासको पूरा नाम सत्यनारायण प्रभास राजु उपलापति हो । उनी निर्माता सूर्य नारायण राजु उपलापतिका छोरा हुन् । सन् १९७९ मा जन्मिएका प्रभास पेशाले एक्टर भए पनि पढाइ इन्जिनियरिङमा गरेका थिए । उनले २२ वर्षको उमेरमा तेलूगु फिल्म “इश्वर”मा डेब्यु गरेको हुन् ।
याे पनि पढ्नुस यस्ता छन् प्रभासका फिटनेस सूत्र
उनी एउटा फिल्म खेलेबापत २१ देखि ३० करोड भारतीय रुपैयाँ लिन्छन् भने उनको वार्षिक आम्दानी ३.२ मिलियन डलर रहेको छ । उनको नेटवर्थ १९.१–२४.५ मिलियन डलर रहेको छ । उनले सन् २०१६ मा ७ करोड ट्याक्स तिरेका थिए ।
बाइक र कारको सौखिन प्रभाससँग ७ लाख भारतीय रुपैयाँको होन्डा सिभिआर ६०० आरआर बाइक, १.४४ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने मर्सिटिज बेन्ज एस–क्लास, २.८२ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने कस्टम रेन्ज रोभर, १.२४ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने जागुएर एक्सजे(एल र ८ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने रोयल्स रोयस फ्यान्टम कारहरु छन् ।
याे पनि पढ्नुस अख्यितारकै पूर्वप्रमुख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा, विभागद्वारा सम्पत्ति रोक्का
ट्याग्स: प्रभास, सम्पत्ति